ရွှေလီသား: April 2012
Posted by ရွှေလီသား at 02:22 No comments:
သို့သော် ... ဝါသနာ ခံယူချက်အတွက်
ပုံစံခွက် နှင့် ကျင်လည်သည် ...။
သို့သော် ...သစ္စာလေးတန် အဓိဌာန်ကြောင့်
ရွှေ့တဲ့အကွက်တိုင်းမှာ တာဝန်ကျေမည် ...။
နှလုံးသားစေစားရာ ဦးနှောက်နှင့် ရှာလိုသည်
သို့သော် .... ပုခုံးမှာဖက်ဖူးတဲ့ လက်တွေအတွက်
ကျွန်တော့် ဘဝကို ပုံအပ်ထားသည် ...။
ကိုယ် နှင့်မကွာ ဖက်အိပ်နေပါသည် ....။
သို့သော် ... တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုပါက
သို့သော် ...နိုင်ငံနှင့် လူမျိုးးအတွက်ဆိုပါက
ပါဏာတိပါတ် ကို တရစပ်လိုင်စင်ဆွဲလိုသည်...။
စိတ်ထားရှိခြင်း ၊ ခံယူခြင်းကြောင့်
Posted by ရွှေလီသား at 02:17 No comments:
သွေးနဲ့ရေးသော အမေ့မျက်ရည် (သို့) အာဇာနည်မေမေ ( ၀တ္ထု တို ပထမ ဆုရ)
စစ်တက္ကသိုလ် စာပေဌာန(၂) ဘာသာစကားသင်တန်းအမှတ်စဉ်(_) ၏ မနက်ခင်းတခု ဖြစ်သည်...။ တန်းစီသစ္စာဆိုအပြီး ကန်တင်းဘက်ကိုဆင်းလာရင်း မနက်တိုင်းဖတ်နေကျ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကို ဆွဲယူဖတ်လိုက်မိသည်.. ။ "ဟင်.." ။ အာမေဋိတ်သံတစ်ခု ထွက်သွားမိတဲ့အထိ ကျွန်တော်အံ့သြမှင်သက်သွား..။ အာခေါင်တွေလဲခြောက်လို့ ရင်ဘတ်တခုလုံး နာကျင်သွားစေသည့် သတင်းတခုပါ ။ "မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့" အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းနေမိရင်း ဖုန်းဆိုင်ရှိရာဆီသို့ ခြေထောက်တို့က အပြေးအလွှား ဦးတည်၍သွားနေခဲ့သည်ကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင် လျှင် သတိမထားမိခဲ့ပါ ..။ ရင်တခုလုံးကို နာသွားအောင် အရာတခုခုဖြင့် ထုနှက်ထားသကဲ့သို့ပင်.. ။ အသက်ရှူတွေပင် သိပ်မ၀ချင်ပါ။ ဖုန်းဆိုင်ရောက်သည်နှင့် လင်းလင်းတို့အိမ်ဖုန်းကို အငမ်းမရနှိပ်လိုက်မိသည်။ ဖုန်းလာကိုင်သည့် ဗိုလ်ကြီး လင်းလင်းစိုး၏ မိခင်ဖြစ်သူ (အန်တီ)၏ အသံမှာ ထင်မှတ်ထားသကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ တည်ငြိမ်အေးစက်၍ နေသည်.။ "အန်တီ.. သားပါ မောင်.... ပါအန်တီ.." လို့ပြောလိုက်တော့ အန်တီက "အေးသားလေး ..ပြောလေ" ဆိုပြီး ဖြေလိုက်သည့်အသံမှာ တခုခုကိုမေးတော့မည် ဆိုသည်ကို ကြိုတင်သိနေသော အငွေ့အသက်တွေ ပါဝင်နေခဲ့သည်။ "မဟုတ်ပါစေနဲ့ မဟုတ်ပါစေနဲ့" လို့ အကြိမ်ကြိမ် တီးတိုးဆုတောင်းရင်း အရဲစွန့်မေးလိုက်သည်။ "သတင်းစာထဲမှာပါလာတဲ့ ဗိုလ်ကြီးလင်းလင်းစိုး ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခြင်းသတင်း က" လို့ ကျွန်တော်က မေးလိုက်သည့် မေးခွန်းလေး မဆုံးခင်မှာပင် အန်တီကတန်း၍ ဖြေရှာပါသည် "ဟုတ်တယ်သားလေး မင်းသူငယ်ချင်း လင်းလင်း တိုက်ပွဲကျသွားပြီသားရယ် ဆွဲမိုင်းထိတယ်လို့ ခမရ ၃၆၉ တပ်က အကြောင်းကြားလာတယ်.. အလောင်းတော့ ပြန်မရပါဘူးသား အရိုးအိုးပဲ ရလိုက်ပါတယ်" လို့ ပြောအပြီး အန်တီ့ရဲ့စကားသံတွေက သိမ်ဝင်သွားခဲ့သည်။ အန်တီတယောက် တဦးတည်းသော သားအတွက် မည်မျှနာကျင်အောင့်သက်နေမည်မှန်း ကျွန်တော် နားလည်ခံစားပေး၍ရပါသည်။ ခင်ပွန်းသည် ယောက်ျားမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်း သားတယောက်တည်းနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘ၀ကို အထီးကျန်စွာ အားတင်း ဖြတ်သန်းကျော်လွှားခဲ့ရသည့် အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမတယောက်၏ သတ္တိကို ကျွန်တော် မလေးစာဘဲ မနေနိုင်ပါ။ "မျှော်လင့်ချက်က မေမေ့သား၊ မေမေ့သားက မျှော်လင့်ချက်ပါ" လို့ ဖုန်းဆက်တိုင်း သူငယ်ချင်းလင်းလင်း ကို ဆုံးမတတ်သည့် အန်တီ့ရဲ့မေတ္တာစကားသံများသည် သားအရင်းမဟုတ်သည့် ကျွန်တော့်ရဲ့ရင်ထဲအထိ နွေးထွေးစေခဲ့ဖူးသည်။ "သား" လို့ ဖုန်းထဲကခေါ်လိုက်သော ဒေါ်ဘရဏီစိုး၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေသော အသံသည် ကျွန်တော့်ရဲ့ မတည်ငြိမ်မှုတွေကို အတန်ငယ် ထိန်းကွပ်ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့တွေးလက်စ အတွေးတွေ ရုတ်တရက်ရပ်သွားပြီး "ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်တီ" လို့ ထူးလိုက်မိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖြေစရာစကားထို့ထက်ပိုမရှိသလို ပြောစရာစကားတွေကလဲ ဆွံ့အတိတ်ဆိတ်၍ နေပါသည်..။ "သားသူငယ်ချင်း အစ်ကိုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ အန်တီနားလည်ပါတယ် ဒီအပတ်အိမ်မှာရက်လည်လုပ်မယ် သားလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အန်တီ သားကို စကားတွေ ပြောချင်သေးတယ်" လို့ ရှိုက်သံအနည်းငယ်သာ စွတ်ဖက်ထားသော အသံတိုးလေးနှင့် အန်တီကပြောခဲ့သောအခါ တိုင်းပြည်အာဇာနည် သူငယ်ချင်းလင်းလင်း၏ ကျဆုံးမှု ရက်လည်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုအလေးပြုနိုင်ဖို့ ရုံးပိတ်ရက်တွင် အရောက်သွားနိုင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ အိမ်ကိုရောက်သောအခါတွင်လည်း ထင်ရက်စရာမရှိနိုင်အောင် တည်ငြိမ်နေသည့် သားကိုသိပ်ချစ်သော၊ သားအတွက်ဆို အမြဲအဆင်သင့်ရှိသော အန်တီ၏ သားတစ်ယောက်လုံး ဆုံးရှုံးသွားမှုအပေါ် အဆမတန် တည်ငြိမ်နေမှုကို မေးခွန်းထုတ်ဖို့လဲ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားနေမိပါတော့သည်..။
လွန်ခဲ့သည့် (၉) နှစ်ခန့်ကာလတခု၌ အရှေ့တောင်အာရှ၏ တခုတည်းသော စစ်ကျောင်းကြီးလည်းဖြစ် အများမှ (D.S.A) ဟုအလွယ်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသည့် ( Defence Services Academy) (စစ်တက္ကသိုလ်)၏ မနက်ခင်းတခုမှာဖြစ်ပါသည်။ " ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ဘယ်" " ဆောင်ပုဒ်ဆို" ကျားထိုးသံတွေဆူညံစွာနှင့် ပန်းလှေကားမြို့တော် ပြင်ဦးလွင်၏ အအေးဒဏ်များအား အန်တုလို့ မနက်ခင်းအလှကို ချွေးများစွာဖြင့် အလှဆင်နေသော "နောင်တခေတ်၏အောင်စစ်သည်" ဗိုလ်လောင်းများ၏ မနက်ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး သင်ခန်းစာ စတင်အသက်ဝင်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကာလများသည် အမှတ်စဉ်တခုတည်းတွင် PTအတူတူပြေး၊ စီနီယာ၏အပြစ်ပေးမှုကို အတူတူပခုံးဖက်ခုန်၊ ပခုံးဖက်ဂျွမ်းထိုးရင်း ဘ၀တူဖြတ်သန်းခဲ့ကြသည့် အချိန်များပင် ဖြစ်သည် ။ ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀များ ဖြစ်သောကြောင့် ပင်ပန်းမှု ဒဏ်ခံနိုင်သူ၊ ခံယူချက်ပြင်းထန်သူများမှ အရာရှိဆိုသည့် ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လှမ်းဆွတ်ခူး နိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့သူ၊ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းသူများမှာမူ ပန်းတိုင်မရောက်ခင်ပင် နောက်လှည့်အိမ်ပြန် ကြရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ကလဲ ကာယအရာမှာ ထိပ်တန်းပြေးသူ တစ်ယောက် မဟုတ်လေတော့ ဗိုလ်လောင်းဘ၀ လက်ရုံးရည်လေ့ကျင့်မှုများ၏ ပြင်းထန်မှုကို ခိုင်မာသည့် စိတ်ဓါတ်အားနှင့် နှလုံးရည်အား တို့ဖြင့် ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးပါသည်။ ထိုသို့ ဖြတ်သန်းစဉ် အားပေးလက်တွဲ ခေါ်ယူခဲ့သည့် လင်းလင်းဆိုသည့် သူငယ်ချင်းအစ်ကို တယောက်၏ အခန်းကဏ္ဍသည် ကျွန်တော့်ဘ၀ အရာရှိတယောက်အဖြစ် ဖြစ်တည်ရေးတွင် အရေးပါခဲ့သော တကယ့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းလဲဖြစ် အစ်ကိုတယောက်လိုလဲ တကယ်ချစ်ရသည့် လင်းလင်းသည် ကျွန်တော့်ထက်အသက်အနည်းငယ်ပင် ပိုကြီးသေးသည်။ PTပြေးချိန် သူများထက်နောက်မကျစေရန် ခြေထောက်နှင့်မပြေးဘဲ စိတ်ဓါတ်နှင့််ပြေးသင့်ပုံ၊ အပြစ်ပေးခံရချိန် စိတ်အားငယ်လာလျှင် အရှုံးမပေးတတ်သော သတ္တိနှင့်ခံယူသင့်ပုံ၊ တယောက်စာနေထိုင်ချိန် ခုတင်နှင့်ကစ်အခင်းအကျင်းများကို စည်းကမ်းစိတ်ဓါတ်နှင့် ထားရှိသင့်ပုံ များအား လက်တွဲခေါ်ယူသင်ကြားပေးတတ်သေးသည်။ အမှတ်စဉ်တခုတည်း ဖြစ်သော်လည်း သူ၏တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုနှင့် ဘ၀အခင်းအကျင်းသည် စိတ်ဝင်စားစရာ အင်မတန်ကောင်းလှပါသည်။ ထိုအရာများကို ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀၌ပင် ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် လင်းလင်းဆိုသည့် ဗိုလ်လောင်းတယောက်အား ပံ့ပိုးပေးသည့်အရာကို ကျွန်တော်အလေးအနက်ထား စိတ်ဝင်စားလို့ နေမိသည်မှာ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါချေ။ တကယ်တော့ ဖတဆိုးသားတယောက်ဖြစ်သည့် လင်းလင်း၏ခံယူချက်၊ လင်းလင်း၏စိတ်ဓါတ်နှင့် လင်းလင်း၏ စည်းကမ်းတို့သည် ဒေါ်ဘရဏီလင်းဆိုသည့် လင်းလင်း၏မိခင် အန်တီ၏ ခံယူချက်၊ စိတ်ဓါတ်နှင့် စည်းကမ်းများ ဖြစ်သည်ကို နောက်များမှ သိခဲ့ရတာဖြစ်ပါသည်..။ "သားကို မေမေသိပ်ယုံတယ်၊ မေမေ့ကိုသားသိပ်ချစ်မှန်း မေမေသိလို့ သားဖြစ်ချင်တာဆို မေမေက တားမြစ်ထားတာမျိုး ဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး ဘယ်တော့မှလဲ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး မေမေက သားရဲ့ မိခင်တစ်ယောက်လဲ ဖြစ်သလို သားရင်ထဲက တီးတိုးခံစားချက်အပါအ၀င် ခံစားချက်မျိုးစုံကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်လို့ရအောင် နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတယောက်လဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သားမမေ့နဲ့နော်" ဟု လင်းလင်းတယောက် အန်တီ့ထံ ဖုန်းဆက်ချိန်တိုင်း အားပေးစကားများကို အန်တီကထိုကဲ့သို့ ပြောတတ်ပါသေးသည်။ လင်းလင်း၌ အားလုံးထက်သာသည့် တချက်မှာ ဘယ်အရာကိုပဲလုပ်လုပ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင့် ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ကိုင်တတ်သော ၀ံသာနုစိတ်ဓါတ်လေးဖြစ်သည် ။ ဒီလိုတွေဖြစ်လာစေရန် သူ့အမေမှ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ သင်ကြားပေးခဲ့ ဆုံးမပေးခဲ့သည်များကို ကျွန်တော့်အား အမြဲပြောပြပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်၏ စိတ်ဓါတ်များ သူ့ကဲ့သို့ ရဲရင့်မာကျော၊ ပြတ်သားတိကျ၊ ဇောက်ချဇွဲရှိ ဖြစ်လာစေရန် လမ်းပြပေးခဲ့သည်ဟုဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပါချေ။ သားကိုမေတ္တာနှင့်အုပ်ချုပ်တတ်ပြီး တယောက်တည်းရှိသော သားတယောက်ကို အရာရှိကောင်းတယောက် အသက်စွန့်အာဇာနည်ကောင်း တယောက် ဖြစ်လာစေရန် မွမ်းမံပြုစုပေးခဲ့သည့် အန်တီဒေါ်ဘရဏီလင်းကဲ့သို့သော မိခင်တယောက်ကို ကိုယ့်မိခင်အရင်း တစ်ယောက် မဟုတ်သည့်တိုင် ဒုတိယမေမေဟု အမည်တပ်ခေါ်ဝေါ်ချင်မိခဲ့သည်။
၂၀၀_ ခုနှစ် ဗိုလ်လောင်းကျောင်းဆင်းပွဲပြီးချိန် တာဝန်ကျရာတပ်အသီးသီးသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ချိန်မှ စကာ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားခဲ့သည့် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းညီအစ်ကို(၂) ယောက်သည် သတင်းစာထဲတွင် လင်းလင်း၏ တိုက်ပွဲကျဆုံးသတင်း ပါလာမှ ပြန်တွေ့ရမည့်အဖြစ်မှာ အင်မတန်နာကျင်အောင့်သက်စရာ ကောင်းလှသည်။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း အာဇာနည်တယောက် နစ်နာဆုံးရှုံး ရသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်း တွေအတွက်မှာမူ လက်တဖက်(သို့) အားတခုဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရသည်နှင့် ဆင်တူလှပါသည် ။ ဒါဆိုအန်တီ့အတွက်ဆိုလျှင် ရော ။ အန်တီတယောက် ဒီအချိန်ဆိုလျှင် အားအင်တွေချိနဲ့လို့ ရွှေတောင်ကြီးပြိုလဲသလို ချုန်းချုန်းကျ ငိုကြွေး ကျဆုံးနေလောက်ပြီ ထင်ပါ၏။ သားတယောက်တည်းနှင့် ဘ၀တခုလုံး ကို အမေတခု သားတခု ရှင်သန်ခဲ့ရရှာသော ထိုမိခင်သည် အရူးတပိုင်း ဖြစ်အောင် ပူလောင်နေလောက်တော့မည် ။ တည်ငြိမ်မှုတွေလျော့လို့ အန်တီတယောက် ခံနိုင်ရည်ရှိပမလားရယ်လို့ တွေးထားသော ကျွန်နော်၏အတွေးများစွာ ကို အန်တီက တကယ့်ခံယူချက်ကောင်းသော တည်ငြိမ်မှု စစ်စစ်များဖြင့် အနှစ်သာရရှိရှိ သက်သေပြခဲ့ပါသည် ။ အန်တီ့အိမ်ကိုရောက်သွားသောအခါ အန်တီက ကျွန်တော့်အား လှိုက်လှဲစွာနှုတ်ဆက်ရင်း၊ ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို တင်းတင်း ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း ဧည့်ခန်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် ။ ကျွန်တော့်ကို မြင်မြင်ချင်း အန်တီ့ မျက်နှာအမူအရာ အနည်းငယ် မှေးမှိန်ပြောင်းလဲ သွားသည်မှ လွဲလျှင် မျက်ရည်များ စီးကျလာခြင်းမျိုးနှင့် အားငယ်မှု တစုံတရာဖြစ်ခြင်းမျိုးကို အန်တီမှ မပြသခဲ့ပါ ။ လင်းလင်း၏ ယူနီဖောင်းအပြည့်ဖြင့် ရိုက်ထားသည့် ဓါတ်ပုံရှေ့တွင် အမွှေးတိုင်တချို့က နေရာယူထားသည် ။ လင်းလင်းဓါတ်ပုံကို တချက်လှည့်ကြည့်ရင်း အန်တီမှ ပြုံးလိုက်သေးသည်။ ပြီးမှ သားအမိအရင်းတွေလို တယောက်လက်တယောက်ကိုင် နွေးထွေးမှု အပြန်အလှန်ပေးကြရင်း နှင့်ပင် ကျွန်တော်က စကားစလိုက်မိသည်။ "သားခုချိန်မှာ ယူကျုံးမရအဖြစ်ရဆုံးက လင်းလင်းကို နောက်ဆုံးချိန်လေးတောင် မမြင်လိုက်ရတာပဲ အန်တီရယ်။ သားတို့သူငယ်ချင်းတွေ သေကွဲကွဲတာတောင် မမြင်လိုက်ရပါလားဗျာ။ ပြီးတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့ အန်တီ့ကို သားနားမလည်နိုင်သေးဘူး ." လို့ပြောရင်းစီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို အန်တီမှ ပြုံးပြသုတ်ပေးရင်း ပြောပြခဲ့သည့်စကားများသည် ခုချိန်ထိရင်ထဲမှာ စွဲကျန်နေခဲ့တော့တာဖြစ်သည် ။ "သားရဲ့ ၂၁ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်ကာလက လောကကြီးနဲ့ ယှဉ်ရင်ငယ်ပါသေးတယ် အန်တီတို့က ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ များပါပြီ မင်းအစ်ကို လင်းလင်းကို စစ်တက္ကသိုလ် စတက်ပြီဆိုကတည်းက အန်တီကတိုင်းပြည်ကို လှူလိုက်တာပါ ကိုယ့်အသွေးအသားဖြစ်တဲ့ သားတယောက်ကို လှူဒါန်းလိုက်ရတာ သိပ်မြင့်မြတ်တဲ့ မိန်းမတွေကမှ လုပ်နိုင်တယ်လို့ အန်တီကခံယူထားတယ် သားလေးကလဲ သာမန်လူတွေ မလုပ်နိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ဝန်ထမ်းထဲကမှ စစ်ဗိုလ်ဆိုတဲ့ လမ်းကိုရွေးခဲ့တာမို့ သူ့စိတ်ဓါတ်အတွက်လဲ အန်တီက ကျေနပ်ပါတယ်သားရယ် ခုချိန်မှာ ယူကျုံးမရကြေကွဲရတာကို အန်တီမငြင်းပေမယ့် ကျေနပ်စွာ ၀မ်းနည်းပါတယ် သားတယောက်ကို လှူဒါန်းလိုက်တယ်ဆိုတာ ပေးဆပ်လိုက်တာပါ ပေးဆပ်လိုက်တာက မြင့်မြတ်ခြင်းပါ မြင့်မြတ်ခြင်း အတွက် ကျေနပ်ခြင်းပဲ ရှိရမယ် ၀မ်းနည်းခြင်း မဖြစ်ရဘူး ဖြစ်စရာလဲ မလိုဘူး သူကလဲအကောင်းဆုံး လုပ်ခဲ့သလို အန်တီကလဲ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်နေခဲ့တာပါ သားလင်းလင်းရဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကဒီလောကမှာမရှိတော့တာပါ အန်တီ့ရင်ထဲမှာ မရှိတော့တာ မဟုတ်ဘူး တိုင်းပြည်တပြည်လုံးအတွက် သားလေးက တကယ်အသက်ပေးခဲ့ရှာတာ သားလေးပေးခဲ့တဲ့ အသက်တချောင်းအတွက် အသက်တွေအများကြီး ဆက်လက်ရှင်သန်နေကြတယ် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူထုကြီး တရပ်လုံးရဲ့ အသက်တွေက အန်တီ့သားလေးရဲ့ အသက်လေးတွေပဲလို့ တွေးရင်း စိတ်အားဖြည့်ရင်း အန်တီကျေနပ်နေတာပါ အန်တီ့ရဲ့အသွေးအသားဖြစ်တဲ့ သားတစ်ယောက်ရဲ့ အာဇာနည်လုပ်ရပ်အတွက် အာဇာနည်အမေဖြစ်ရခြင်းအပေါ် အန်တီက သိပ်ကျေနပ်တာပါ သား" လို့ပြောရင်း တည်ငြိမ်စွာ စီးကျနေသည့် အန်တီ၏ နှလုံးသား မျက်ရည်များအား ကျွန်တော်သုတ်ပေးရန် ထိုအချိန်တွေက အားမရှိခဲ့ပါ။ အိမ်အပြန်လမ်းတလျှောက်နှင့် ဘ၀လမ်းကြောင်းတလျှောက် အန်တီ၏ ခံယူချက်စကားသံများသည် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးရမှုအပေါ် အမြဲအားပေးနေခဲ့သလိုပင် ခံနိုင်ရည်ရှိစေခဲ့ပါတော့သည် ..။
ထိုလွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခန့်လောက်က အန်တီဒေါ်ဘရဏီစိုး၏ ခံယူချက်စကားလုံးများသည် ယခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲ စွဲလို့နေသေးသည် ။ စစ်သက်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အသက်ပေးကာကွယ်ခဲ့ကြသည့် အာဇာနည်သူငယ်ချင်းတွေလည်း များပြား၍ လာနေခဲ့ကြသည် ..။ အန်တီကဲ့သို့ အာဇာနည်မိခင်များ မြန်မာပြည်တွင် ဘယ်လောက် များလိုက်ကြမလည်း ကျခဲ့ကြသော မျက်ရည်များ ဘယ်လောက်များလိုက်ကြမလည်း နှလုံးသားတွေလည်း ဘယ်လောက်များ လိုက်ကြမလည်း ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရေတွက်လို့ပင် ရနိုင်ပါမည်လော။ "မင်းမရှိတော့ပေမယ့် မင်းရဲ့ အာဇာနည်စိတ်ဓါတ်တွေ အာဇာနည်အငွေ့အသက်တွေ ကျန်နေသေးတယ် သူငယ်ချင်း ပြည်သူထုရဲ့ အသက်တွေက မင်းပေးဆပ်ခြင်းကနေ ရခဲ့တဲ့ ရလဒ်တွေပါ မင်းရဲ့သေဆုံးခြင်းက ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမဟုတ်ဘူး တည်ရှိနေခြင်းပါ မြင့်မြတ်ခြင်းပါ မင်းမှာ မင်းအတွက် ဂုဏ်ယူရင်း ဆက်လက်ရှင်သန်နေတဲ့ အာဇာနည်မေမေတယောက်ရှိတယ် အဲဒီအာဇာနည်မေမေမှာလဲ မင်းလိုပေးဆပ်ရဲလွန်းတဲ့ ၀ံသာနုသားတယောက်ရှိတယ် မင်းတို့သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ အာဇာနည်စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားစွာ အလေးပြုလိုက်ပါတယ်" လို့ လင်းလင်းနဲ့ အာဇာနည်မေမေ အန်တီဒေါ်ဘရဏီစိုးကို ကျွန်တော် ပြောပြချင်မိသည် ..။ ထိုကဲ့သို့ တိုင်းပြည်အတွက် စတေး သွားသည့် တပ်မတော်သား အားလုံးတို့နှင့် ထိုသူတို့၏ မိခင်များမှ တိုင်းပြည်အပေါ်ပေးဆပ်မှုကို မည်သူကမှ သတိထားမကြည့်လျှင် သိနိုင်မည်မထင် ။ ဒီမျက်ရည်တွေ မည်သူမှ သုတ်ပေးနိုင်မည် မထင်။ ဒီခံစားချက် မည်သူမှနားလည်ပေးနိုင်မည် မထင်။ ဒီသားတွေအတွက် ဒီမေမေတို့၏ ရင်တွင်း နာကျင်မှုများစွာကို နှိမ်သိမ့်ပေးနိုင်မည် မထင်။ မျက်ရည်တွေ နှလုံးသားတွေ ခံယူချက်စိတ်ဓါတ်တွေ ရင်းနှီးပြီးသော်လည်း ဘယ်အရာတစိုးတစဉ်းသော်မျှ ပြန်လည်ရယူခြင်း အလျဉ်းမရှိတဲ့ တိုင်းပြည်၏ အာဇာနည်မေမေများစွာအတွက် "အာဇာနည်မိခင်" ဆိုသည့်ဆုတခုကို ပေးလို့ရမည်ဆိုလျှင် ပေးစေချင်မိကြောင်း မချင့်မရဲပြောမိရင်း လွန်ခဲ့သော နှစ်အတန်ကြာက မြန်မာ့ တပ်မတော်အရာရှိ တစ်ဦး၏ အာဇာနည်မိခင်မေမေ တယောက်အကြောင်း တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို လူအများအား သိစေချင်သော စေတနာ ကို ရှေ့ထား ရေးသား မိရပါတော့သည် ..............။
ဒီဝတ္ထုတိုကို တိုတိုလေးရေးထားရပေမယ့် တကယ်တမ်းရေးမယ်ဆို အနည်းငယ် ပိုရှည်မှာဖြစ်ပါတယ် .. ဒီမှာရေးထားတဲ့ စကားလုံး တလုံချင်း စာလုံးတလုံးချင်းဟာ သားကို ချစ်တဲ့အမေတယောက်ရဲ့ ဘ၀ရပ်တည်မှု ၊ စစ်သားတယောက် ရဲ့ ဘ၀တာတိုတိုမှာ အမေဟာ ရင်နာကျန်ရစ်ရတဲ့ ခံစားချက်တင်ပြမှု အချို့အပါအ၀င် ကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံ့စစ်သည်တယောက်ကို သားအဖြစ်တော်ထားရတဲ့ ကလကာနောက်ကွယ်က အမေတယောက်ရဲ့ နှလုံးသားဒဏ်ရာ တွေအတွက် စိတ်အားဖြည့်ရေးသားထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ် .. စစ်သားမေမေများ စိတ်ချမ်းသားကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ ... ။ မိခင်တိုင်းရဲ့ မေတ္တာစိတ်နှင့် နှလုံးသားနို့ရည် တစက်ကို ဒီစုတ်တံတချက်ဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်လိုက်ရပါသည် ..။
Posted by ရွှေလီသား at 14:01 No comments:
Posted by ရွှေလီသား at 13:19 No comments:
ငါတို့တွေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အမိအိမ်၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူတွေ လူငယ်ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ပါးပါးနေနေရတဲ့အချိန်မှာ မိမိအသက်တွေကို နိုင်ငံအတွက် စွန့်လွှတ်ဖို့ သစ္စာဆိုပြီး တပ်မတော်ထဲကို ၀င်လာခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့တွေ တပ်မတော်ထဲရောက်လာလို့ တပ်မတော်သားလို့ခေါ်ကြပေမယ့် ငါတို့တွေ အတွက်ကတော့ ပြည်သူက မွေးပြီး ပြည်သူထဲက ပေါက်ဖွားလားတဲ့ ပြည်သူ့သားလို့ ခံယူထားကြတယ်။ အခုချိန်မှာ ငါတို့တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားနေကြတယ် ။ မကောင်းတဲ့သူတချို့ကြောင့် ငါတို့ကိုပါ ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရမ်းခံနေရတယ်။ အဲလိုရမ်းခံရတာထက် တပ်မတော်သားနဲ့ ပြည်သူကို ခွဲခြားခံထားရတာဟာ ငါတို့အတွက် စိတ်မကောင်းအဖြစ်ဆုံး ခံစားရအခက်ဆုံး အဆိပ်တခွက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် တပ်မတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာတောင် ပြည်သူတွေထဲကပြည်သူ့တပ်မတော် လို့သာပြောင်းပေးလိုက်စေချင်တယ် ။ အားလုံးဟာပြည်သူပဲမို့ ငါတို့တွေဟာ ငါတို့နိုင်ငံကိုချစ်ကြတယ်၊ နိုင်ငံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၊ ထာဝစဉ် ငြိမ်းချမ်း သာယာတာ မြင်ချင်ကြတယ် ။ ရည်မှန်းချက်ချင်းတွေတူကြတာမို့ ပြည်သူတွေထဲက အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေ့ရင်တောင် သွေးခွဲ ပစ်ပယ်သလို ဖြစ်မယ့်စကားတွေကို ရှောင်ရှားပြီး အေးဆေးစွာနဲ့ ဖြေရှင်းရမယ့် ကောင်းသော ထောက်ပြမှုများနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြုပြင်သွားကြရမယ်။ ယခုမျက်မှောက်ကနေစပြီး ငါတို့တွေ အချင်းချင်း ညီရင်းအကိုပမာ သွေးစည်းညီညွတ်စွာ နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ဆက်ဆံသွားနိုင်အောင် ငါတို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြမယ်။ နောက်ဘယ်အဖွဲ့အစည်း ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကမှ ကိုယ့်ပြည်သူအချင်းချင်းပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်၊ တစ်ဖက်သတ်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေမရှိအောင် ကိုယ့် နီးစပ်ရာအဖွဲ့အစည်းကနေပြီး တယောက်နဲ့တယောက် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားသွားကြမယ်။ နောက်တပ်မတော်သားဆိုပေမယ့် အခြားကျန်တဲ့ပြည်သူတွေလို ခံစားချက်ရှိတဲ့ သာမန်လူသားတွေဖြစ်သလို ပြည်သူထဲကပေါက်ဖွားမွေးထွက်လာတဲ့ ပြည်သူကမွေးတဲ့ပြည်သူ့သားတွေမို့ ပြည်သူပါပဲ။ပြည်သူတွေ တပ်မတော်အပေါ် မကျေမနပ်တာတွေရှိခဲ့ရင်လဲ အခုချိန်မှာ ကျေလည်ပေးပါ။ မကောင်းတဲ့သူရှိနေရင်တောင် အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ထိခိုက်တာထက် ကိုယ့်ပြည်သူ၊ပြည်သားကို ပစ်ပယ်သလိုဖြစ်နေတာ၊ သီးခြားဖြစ်နေပြီး စိတ်သဘောထားကွဲလွဲနေကြတာတွေကို မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်။ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ လက်အတိုအရှည်မညီသလို လူတွေရဲ့ စိတ်ဓတ်တွေဟာလဲ အမျိုးမျိုးပဲမို့ အမြင်ချင်းကွဲပြီး သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ရှိနေတက်သလို ကောင်းတဲ့သူနဲ့ မကောင်းတဲ့သူ ရောနေတက်ပါတယ်။ အဲလိုမကောင်းတဲ့သူရှိနေရင်တောင် ငါတို့တွေက သူတို့တွေကို တက်နိုင်သလောက် နားလည်မှုပေးပြီး စိတ်ထားမေတ္တာအမှန်နဲ့ ထောက်ပြပေးရင် လက်တွဲခေါ်သွားနိုင်မယ်။ တပ်မတော်ကြီးမှာလဲ မတစ်ထောင်သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ စိတ်ဓတ်မျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေ မတူကြတာကြောင့် လိုအပ်ချက်လေးတွေ အမြဲလိုလို ရှိနေတက်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာ ငါတို့တွေသေချာပြောနိုင်တာကတော့ ငါတို့တွေအားလုံးဟာ အဲဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကို အကောင်းဆုံးပြည့်စုံကောင်းမွန်နေအောင် ကြိုးစားနေကြတယ်။ တပ်မတော်သားလဲ ပြည်သူပဲဖြစ်တာမို့ ပြည်သူရဲ့ ခံစားချက်ကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ဘက်ကနေအကောင်းဆုံးရပ်တည်ပေးသွားနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေမှာ ကြိုးစားသွားချင်တာကြောင့် တပ်မတော်သားပြည်သူနဲ့ နိုင်ငံတွင်းကကျန်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ခွဲခြားတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ပါ။ အခုချိန်ထိ ကောင်းအောင်လုပ်ချင်ကြိုးစားနေချင်တဲ့သူတွေပါ ရောရောင်မိုးမွှန်အောင် ဆဲခံရတာထက် အရင်နှစ်၂၀ကျော် ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘ၀ကလိုအပ်ချက်တွေ ဖြစ်ပျက်ပြီးခဲ့တဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးချင်းခွဲခြားခံနေရတာ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေမှာတောင် အားအင်မရှိအောင် ခံစား ရင်နာမိရတယ်။ နောက်ယခုလူငယ်တွေဟာ နောင်တခောတ်ရဲ့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ပုခုံးပြောင်းတာဝန်လွှဲပြောင်းယူရမယ့် သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ခုချိန်မှာတော့ အချင်းချင်းအမြင်မကြင်လင်တာလေးတွေ ကင်းရှင်းသင့်ပြီ။ အရေးအခင်းတွေဖြစ်တုန်းက တပ်မတော်ပေါ်မကျေနပ်ခဲ့တာတွေရှိမယ်။ ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ် အားလုံးရဲ့ခံစားချက်တွေကို။ နောက်အဲဒီအချိန်မှာလဲ တပ်မတော်သားတွေရဲ့အမျိုးတွေအသက်မပါဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ???။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာရင် အတက်နိုင်ဆုံး ကောင်းမွန်စွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အေးဆေးဖြေရှင်းရမယ့်နည်းကိုသုံးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါ။ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတော့ အစိုးရကော၊ အတိုက်အခံဘက်ကကော ၂ဘက်လုံးက လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ပဲ။ နောက်မြန်မာလူမျိုးတချို့ရဲ့ အမြင့်ရောက်ရင် နထင်သွေးရောက် ဘ၀င်မြင့်လေဟပ်ချင်ကြတယ်။စင်ပေါ်ရောက်ရင် ဟောက်ချင်တယ်၊ဟိန်းချင်တယ်၊ ပါဝါပြချင်တယ်.. အဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဓတ်တွေကို ပြင်ရမယ် (ကျွန်တော့်ကိုတောင် ပါဝါပြဟောက်တာကိုယ်တွေ့ခံခဲ့ရဖူးတယ် ဖြစ်ပုံကတော့ ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ကားနဲ့တုန်းက လမ်းချပေးမရတဲ့ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုက မလောက်လေး မလောက်စား၂ယောက်က ဟောက်စားလုပ် ပါဝါပြသွားတယ်)။ တပ်မတော်သားထဲမှာလဲ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ရှိနေရင်လဲ ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြရမှာ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်သလို အားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်။ အဲလိုစိတ်ဓတ်တွေဟာ တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းတခုထဲမှာမှ ရှိတက်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေမှာလဲ အပုံကြီးပါ။ နောက်တပ်မတော်ဆိုတာက ပြည်သူဆိုတဲ့ စက်ရုံထဲက ထွက်လာတဲ့ ပြည်သူတွေပါ။ခြေမမကောင်းခြေမပေါ့။နိုင်ငံမှာတပ်ကိုခွဲထုတ်ပစ်ပါယ်ထားလို့လဲမရနိုင်သလို ပြည်သူကို တပ်မတော်ကလဲ ပစ်ထားလို့မရပါ။ ပြည်သူချစ်တဲ့ အားကိုး အားထားရတဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်အောင်လဲ ကျွန်တော်တို့ ယခုအချိန်မှာ အတက်နိုင်ဆုံး ပြည်သူယုံကြည်မှုရှိအောင် အထက်အောက်စည်းလုံးညီညာစွာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားသွားချင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း တပ်မတော်က ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်ကာကွယ်ပေးကာ ပြည်သူကို မိဘပမာ ဦးထားဂိုဏ်းထားကာ ဆက်ဆံသွားချင်သလို ပြည်သူ့ဘက်ကလဲ တပ်မတော်သားများအပေါ် နားလည်မှုအပြည့်အ၀နဲ့ လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်သားတချို့ ရှိရင်တောင် ညီရင်းအကိုပမာ တယောက်နဲ့တယောက် ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းပေးပြီး အချင်းချင်းလေးစားမှုလေးတော့ရှိပေးပါ။ လူတိုင်းမှာ အမှားကိုယ်စီမကင်းကြပါဘူး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်အမှားကင်းအောင်နေဖူးလားဆိုတောင် ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးကြည့်ပါ??? အဲ့တော့ ခံစားချက်ကို နောက်မှာထားပါ ခု လက်တွဲဖို့ လိုတဲ့ ချိန်မှာ လက်တွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ယုံကြည်စွာကမ်းလိုက်ကြပါဗျာ။ကိုယ်စီကိုယ်စီ ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်သွားရင်းနဲ့မှ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရမှာပါ ။သူ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့် လက်ညှိုးလိုက်ထိုးလိုက် လူတကာကို အပြစ်လိုက်ရှာလိုက် အပြစ်ပုံချလိုက်နဲ့ကတော့ လိုချင်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ မိမိကိုယ်သာ မိမိ လိုအပ်တာတွေကို ပြုပြင်ကြဖို့ပါ ။ နောက်ခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်သားတွေအားလုံးဟာလဲ နားလည်မှုတည်ဆောင်နိုင်အောင် အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူတွေတက်တက် နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲ စောင့်ကြည့်နေတာပါ ။တပ်မတော်သားတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်သူအုပ်ချူပ်နေပါစေ ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမှာပါ။ အဲဒီတာဝန်ကလဲ ယခုချိန်ကစ၍ ပြည်သူကိုကာကွယ် အရေးပေး ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အရင်ဆုံးကြည့်တဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်သွားအောင် ကျွန်တော်တို့တွေ ကြိုးစားသွားချင်တယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ တပ်မတော်သားထဲက မဟုတ်မမှန်တာလုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်တောင် အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တိတိကျကျနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို အပြစ်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲ တိကျစွာ ထောက်ပြပါ အချို့သောသူတချို့ရဲ့ အဲဒီလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် သွေးခွဲခံရမှာ မို့ပါ။ အဲလိုသူတွေရှိနေရင်လဲ အားလုံးဝိုင်းပြီး အရေးယူသွားနိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ကပါ ၀ိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက် တိုက်ဖျက်သွားပါ့မယ်။နောက်အရင်က လိုအပ်ချက်မျိုးတွေရှိခဲ့ရင်တောင် အဲဒါမျိုးတွေ ယခုမျက်မှောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်အောင် ကြိုးစားသွားမယ်။ အချို့သူတွေက စစ်တပ်ကို ကြည့်မရဘူးတွေ ဘာတွေ ပြောနေရအောင် ပြီးတော့ သူများနိုင်ငံတွေကိုတိုးတက်တယ်ပြောရအောင် ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အဲလိုသူမျိုးတွေဘယ်သူကရော လိုလိုလားလားနဲ့ စစ်မှုထမ်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားကြလို့လဲ စစ်မှုတစ်ရက်တောင် မထမ်းဖူးတော့ တပ်မတော်သားတွေရဲ့ နေရာမှာ ၀င်မခံစားဘူးတော့ အရင်နာကျည်းချက်တွေနဲ့ ယခုတိုင်တဖက်အစွန်းရောက်ကြည့်နေတာဟာ ကောင်းအောင်ကြိုးစားနေချင်တဲ့သူတွေကိုပါ ထိုးနှက်မှုတခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင် မိမိသာ အဓိက ဖြစ်သည် မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကောင်းမှ တိုင်းပြည်တိုးတက်မည်။ ပြည်သူအားလုံးကလဲ စစ်တပ်ကို မမုန်းဘူးဆိုတာ ယုံပါတယ်။စစ်တပ်ဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့အသက်ပါ.. အဲဒီအသက်က တလွဲဖြစ်နေခဲ့တာတွေရှိခဲ့ရင်တောင် အကောင်းဆုံး တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းပြင်ဆင်သွားကြမယ်။နောက်မြန်မာလူမျိုးအချို့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမလုပ်ပဲ အပြစ်တင်သာပြောတက်ပြီး ဖြေရှင်းဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားကြတာလေးတွေကိုပြင်ရမယ်။(ဥပမာ အခြားလူတယောက်အလုပ်လုပ်တာကြာရင် အရမ်းနှေးကွေးတယ်တဲ့၊ ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ စေ့စပ်သေချာတာတဲ့။ ကိစ္စတခုကို အခြားသူမလုပ်ချင်ရင် ပျင်းတာတဲ့၊ ကိုယ်မလုပ်တော့ အလုပ်များလို့တဲ့။ အခြားသူတယောက်ရဲ့အယူအဆကို အကြောက်အကန်ပြောနေရင် တဇောက်ကန်းတယူသန်တဲ့၊ ကိုပြောရင်ကျတော့ သဘောထားပြတ်သားခိုင်မာတာတဲ့။ အခြားလူတယောက် အစဉ်အလာကျင့်ဝတ်ကိုဖောက်ဖျက်ရင် ယဉ်ကျေးမှုမရှိတာတဲ့၊ ကိုယ့်အလှည့်ကျတော့ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုတဲ့။ အဲလိုစိတ်ဓတ်တွေပြင်ရမယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်က လူများကိုပြောချင်ရင် ပြောချင်တဲ့ဟာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အရင်ကြိုးစားပါ။ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲ မထားကြပါနဲ့။ အယူ အဆ မတူတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ တင်းမာမှုဆိုတာရှိလာနိုင်တယ်.။ အဲလိုချိန်မှ တဖက်ဆီက ခံစားချက်ကိုယ်စီကို နားလည်ပေးပြီး ယုံကြည်မှု ထာဝစဉ်တည်မြဲနေအောင်တည်ဆောက်ရမယ်။ တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူထဲက ပါပဲ ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက ၀န်ထမ်းတွေက ပြည်သူတွေပေးတဲ့ လစာ နဲ့ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းဆိုတဲ့ နာမည်ကို ခံယူထားသမျှတော့ ပြည်သူ့ အသံ ပြည်သူ့ လိုအပ်ချက်ကို ထည့်စဉ်းစားပေးနေရပါ့မယ်။ ဒါမှလဲ ပြည်သူ့ရဲ့ မေတ္တ္တာအပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုရမှာ သေချာပါတယ်။ နောက်ပြည်သူ့အတွက်တပ်မတော်ဖြစ်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားချင်နေကြတဲ့ ယခုလိုမျက်မှောက်မှာတော့ သိမ်းကြုံးပြီးပြောတာမျိုးကို ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး.။ ဘယ်လောက်ပဲ မကောင်းမြင်ခံရခံရ ကြိတ်မှိတ်ပြီးလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်.။ သူတို့တွေက ဘယ်လောက် လုပ်လုပ် ခြုံပြောလိုက်တာက သူတို့ကို အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်လျော့သွားအောင် ၊စေတနာလျော့သွားအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲ.။ စစ်သားထဲမှာလည်း　ရှေးကရော　အခုရော　မျိုးချစ်　စစ်သားတွေ　ရိုက်သတ်မကုန်ဘူး.။　ဒါပေမယ့်　တို့တွေက　စကားပြောတာ　ပြတ်တယ်.။　ဒဲ့ဒိုးပဲပြောတတ်တယ်.။ ငါတို့ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့　အကောင်းမမြင်ကြပါဘူးကွာ　လို့ထင်သွားတဲ့တစ်နေ့ တိုင်းပြည် နွံနစ်တဲ့နေ့ဖြစ်သွားမှာ အသေချာပဲမို့ အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို ထိခိုက်စေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မကောင်းတဲ့သူတွေကို သာတိတိကျကျနဲ့ ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တပ်မတော်ထဲမှာလဲ　တကယ့်ကို　အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး　လက်ရုံးရည်ရော　နှလုံးရည်ပါ　ပြည့်ဝတဲ့အရာရှိတွေအများကြီးရိုက်သတ်မကုန်အောင်ရှိနေပါတယ်.။ပြောချင်တာကတချို့သူတွေရဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းရေးစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့　တပ်မတော်ကိုတော့ အားလုံးက မကောင်းဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ မပုတ်ခတ်ပါနဲ့။ ဒါ့ပြင်တပ်မတော်　မပါဝင်ပဲ　ဘယ်　နိုင်ငံမှ　မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး.။　နိုင်ငံတိုင်းကိုလည်း　ပြည်သူတွေမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကပဲ　တည်ထောင်လာကြတာပါ.။တပ်မတော်　အင်အားနည်းပါးရင်　ချိနဲ့နေရင်　ဒေသတွင်းမှာတောင်　လူမလေးခွေးမခန့်　လုပ်ခံရတတ်ပါတယ်.။ဒါပေမယ့်တပ်မတော်အနေနဲ့လဲ ပြည်သူ့အပေါ်ကို မိဘအရင်းပမာ ဆက်ဆံသွားရမယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ တစ်သားထဲဖြစ်ဖို့ ငယ်စဉ်ထဲက လက်လှမ်းမှီတဲ့ သူနဲ့ ဆွေးနွေး ခွင့်တွေ ယခုလိုရအောင်လုပ်ပေးသင့်ခဲ့တာပါ။ ဒါမှ တစ်ချိန် နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့ အခါ အောက်သက်ကြေတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ၊ ပြည်သူ ချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားတွေဖြစ်လာမယ်။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ သမိုင်းကိုပြန်လှန်ပြီး လက်တွဲရမှာကိုကြောက်ရွံနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ငြိမ်းချမ်းမှု ကိုမရောက်နိုင်ပါ။ ငါသည်တပ်မတော်သား၊ အေး…နောက် မင်းလဲ ပြည်သူ ငါလဲပြည်သူပဲကွ၊ ငါတို့စစ်သားတွေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ် အခုမျက်မှောက်မှာ။ပြည်သူအနေနဲ့လဲ အခုချိန်မှာ စစ်သားဆိုပြီး အရင်ကကြောက်နေခဲ့ရင်တောင် အခုချိန်မှာ မကြောက်တော့ပဲ ညီအကိုရင်း သွေးရင်းသားပမာ ဆက်ဆံစေချင်တယ် ။ ငါတို့တွေ အဲလိုသဘောပဲထားတယ်။ တကယ်တော့ဗျာ နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက် အားလုံးလက်တွဲသင့်နေပါပြီ....မယုံကြည်မှုတွေရှိခဲ့တာတွေကို မေ့ပျောက်ပြီး ခုချိန်မှာ ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ လက်တွဲသွားရအောင်။ အခုဆိုအားလုံးရဲ့သဘောထားတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သိလာပြီ ။ဟို အရင်ထဲက နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်လာကြတာ ဒီဇတ်လမ်းတွေဘဲ အချင်းချင်းနောက်ကြောင်းပြန်ဆွေနွေးမှုတွေကြီး ဘဲဖြစ်နေခဲ့တယ် အဲ့တော့ ကား ခုချိန်မှာ ကိုယ့်ဘက်သူ ဘက်နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ နိုင်ငံကောင်းအောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြရအောင်။့ နောင်တော် ညီအကို အဖွဲ့ တွေကို ယုံတယ်ဒီချိန်မှာ လိုအပ်နေတာငြိမ်ချမ်းရေးပါ။ဟိုးးးခေတ်ကဟာတွေပြောနေရအောင်လဲခုမျက်မှောက်မှာလူငယ်တွေကြီးပဲဘယ်သူမှမသိလိုက်တဲ့အချိန်က ဟာတွေကိုလဲထည့်ပြောနေမထူးခြားလာပါဘူး ။ သမိုင်းကိုသာသိထားသင့်ပြီး အတိတ်ကလိုအပ်ချက်မျိုးတွေ အနာဂတ်မှာဖြစ်မလာဖို့ အရေးကြီးဆုံးပါ။ခုချိန်မှာလူငယ်တွေက အမြင်အတွေးခေါ်အရမ်းကောင်းကြတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြံညဏ်ပေးပြီး သင့်သင့်မြတ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကောင်းပါတယ်။အဲဒီလို ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် မကျေလည်တဲ့သူများရှိနေရင်လဲ ကွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးပြီး လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုတယ်ဆို ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော် ပြည်သူနဲ့ အာဏာရ သမ္မတ လက်တွဲ ဖို့လိုတယ် ။ ပြည်သူ့ လိုအပ်ချက်ကို သမ္မတ က ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရပေးရသလို ပြည်သူ့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက် တပ်မတော်က ဆောင်ရွက်ဖို့ လက်ကမ်းပေးဖို့ လိုတယ်။ တစ်ယောက်စိတ်ကိုတစ်ယောက်ဖတ်ပြီး သူအပြော ကိုယ်အပြောကိုနားလည်ရင် ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်ကြရင် အဆင်ပြေလာမယ်။ တပ်မတော်သားတွေဘက်ကလဲ ပုံတွေတင်ပီး ဟိုလိုဒီလိုတွေအစား ဟိုဆိုက်ဒ်ဒီဆိုက်ဒ်ကို မျှဝေနေမယ့်အစား အသိညဏ်မြင့်မားမဲ့စကားလေးတွေ ပြောစေချင်သလို အတိုက်အခံတချို့ဘက်ကလဲ အဲလိုနားလည်မှုမျိုးနဲ့ ကောင်းသောလူပီသသော စကားတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်ညှိနှိုင်း နေသွားရင် ကွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုတွေရလာမယ်။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်သာရှိရင် အားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ စိတ်ဝမ်းမကွဲ သွေးစည်းညီညွတ် တန်းတူအခွင့်အရေးမျိုးကို မြင်စေချင်မှာကို မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာ။ပြည်သူ+တပ်မတော်+တိုင်းရင်းသားပါတီများ+ ပြည်ခိုင်ဖြိုး+NLD+တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ= ဒီမိုကရေစီသာဆိုအမှန်တိုးတတ်ပါပီဗျာ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတာ တကယ်တော့ နားလည်မှုလေး တည်ဆောက်ခြင်းပါဘဲ။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် ကဲဒီနိုင်ငံမတိုးတတ်နိုင်ပါ့မလား။အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့အတူ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ တလွဲဆံပင်ကောင်းတွေသာ ပြင်ပြီးမြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ လင်းလက်ဆုံး ကြယ်လေးတပွင့်အဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြားလာအောင် လုပ်ကြဖို့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန်ရှိလာပြီ၊ အချိန်ကြပြီ ဖြစ်တာမို့ လက်တွဲစည်းလုံးကြဖို့ ကျွန်တော်တို့ လက်ကမ်းကြိုဆိုလျက်ပါ ညီနောင်သားချင်းများ။ သွေးခွဲမှုတွေများလာတဲ့ စစ်သားတွေဒီလိုခံစားလာရတာဟာ တိုင်းပြည်တွက်ဘယ်လိုမှမကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေဘဲ ဖြစ်တယ်။ဒီစနက်တွေပြည်သူတွေသိပြီး မင်းတို့မကောင်းကြောင်းပြောနေတဲ့ငါတို့ ဘ၀ တွေကို မင်းတို့ကို သိစေချင်တယ်။ မှန်ပါတယ် စစ်သားတိုင်း မကောင်းပါဘူး၊မဖြူစင်နိုင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ငါတို့ရဲ့ တာဝန် ကတော့ ဖြူစင်ပါတယ်။ငါတို့လည်း လူတွေထဲက၊ပြည်သူထဲက မွေးဖွားလာ တဲ့ လူထဲကလူ တစ်ယောက်ပါကွာ၊ မင်းတို့ လိုပဲ ခံစားချက်တွေ ကိုယ်ဆီတော့ ရှိတာပေါ့။ငါတို့ ဟာ တပ်မတော်ထဲ ကိုအကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်လာ ကြပါတယ်။ဒါပေမယ့် ယူနီဖောင်း ၀တ်ပြီး တာဝန် ကိုစထမ်း ဆောင်ပြီး ဆိုရင်တော့ ငါတို့ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တိုင်းပြည်နဲ့လူ မျိုးကို ကာကွယ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တယ်။မင်းတို့တွေ ကပြောတယ် စစ်အာဏာရှင်စနစ် စစ်အာဏာ ရှင် စနစ် မှန်ပါတယ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်က မကောင်းဘူးဆိုတာ ။ဒါပေမယ့်ငါတို့ဘာလို့လုပ်ခဲ့ရလဲ မလွဲသာတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ငါတို့တိုင်းပြည် ကို ကယ်တင် ဖို့နည်းလမ်း တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ရတာပါ။မင်းတို့မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့ ငါတို့ စစ်သားတွေက ပိုတောင်မလုပ်ချင်သေးတယ်။ ဘာလို့လုပ်ခဲ့ရလဲ ငါတို့မှာ အမိန့် ဆိုတဲ့ အသုံး အနှုန်းကိုမလွန် ဆန်နိုင်ကြပါဘူး။ငါတို့မှာ ဒီမိုကေ၇စီမရှိပါဘူး၊လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေ နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ အလုပ်တွေ ကိုငါတို့လုပ်နေရတယ် ဆိုတာကိုပြည်သူ တွေနားလည်စေချင်တယ်။ငါတို့လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေက စဉ်းလုံးကျွတ် မှန် တယ်လို့ ငါမဆိုချင်ပါဘူး၊ဒါပေမယ့် အကုန်လုံးတော့မမှားခဲ့ပါဘူး။မှားခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်စေတနာ အမှားတွေပါ။အဲဒီ စေတနာ အမှားတွေ ကို အမှားကြီးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် တော့ ငါတို့က ၀မ်းနည်း နေယုံနဲ့ ဘာမှပိုပြီးမတောင်းဆို နိုင်ပါဘူး။မင်းတို့သုံးတဲ့ စစ်ခွေးဆို တဲ့ အသုံးအနှုန်း ဟာ ဖြူစင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့ ငါတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေ ဘယ်လောက်နာကျင် ခဲ့လဲမင်းတို့မသိ နိုင်ပါ ဘူး။မှန်ပါတယ် စစ်ခွေး ခွေးက အိမ်မှာနေတယ် ကျွေးတာ စားတယ် အိမ်စောင့်တယ် ။သူခိုး မကပ်နိုင်ဘူးစသည် ဖြင့်ပေါ့ မင်းတို့ မမှားပါဘူးမှန်ပါတယ် တယ်..မမှားပါဘူး....အိမ်ကတော့ ပြည်သူတွေ ပေါ့ ပြည်သူတွေ ကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တဲ့ ခွေး ပေါ့...စစ်ခွေး လို့ မသုံးစေချင် ဘူးကွာ...ပြည်သူတွေကိုစောက်ေ၇ှာက်ကာကွယ် နေတဲ့(ပြည်သူ့ခွေး)တွေပါကွာ.....ငါတို့ရဲ့လွတ်လတ်ခွင့်တွေ၊ပျော်ရွှင်ခွင့်တွေ၊အသက်တွေနဲ့ သွေးတွေ ကိုစတေးပြီး တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်နေတာပါ....ဒါဆိုမင်းတို့ကမေးမှာ ပေါ့ ဘယ်လို့စစ်ထဲဝင်လဲဆိုပြီး...ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြော ခဲ့ပါတယ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ေ၇ာက်ခဲ့ကြတာပါ....သူများတွေပျော်ရွှင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀တွေ မှာ ငါတို့တွေ ဘာလုပ် ခဲ့ရလဲ...ကျောင်းကို လွယ်အိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့ စာအုပ်ပါးလေး ထည့်ပြီး သွားတဲ့အချိန်မှာ ငါတို့တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲ....သူများတွေ ကျောင်း ကားလေးနဲ့ ကောင်မလေးတွေ၊ကောင်လေးတွေ ပျော်ရွှင်စွာ သွားခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေ မှာ ငါတို့တွေ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြလဲ.....ကိုယ်ချင်းစာ ဖို့မပြော ပါဘူး....ဒါပေမယ့် မင်းတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းလေး တွေထက်တော့ ကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ် ဆိုတာတော့ မင်းတို့ကိုသိစေချင်တယ်.... အဲလို ကြမ်းတမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ငါတို့ဟာ လည်းသွေးနဲ့သား နဲ့တည် ဆောက်ထားတဲ့ လူထဲကလူ သားတွေပါ....စက်ရုပ်တွေ မဟုတ်ပါ ဘူး။ မင်းတို့ထက်နာကျင်မှုတွေ ရှိတယ် လို့တော့ မပြောချင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် မင်းတို့ထက်တော့ မနိမ့်ပါဘူး......ကျွန်တော် Final year တုန်းက ကျွန်တော့် အခန်းက သူငယ်ချင်းအကြောင်း လေးကိုဒီနေရာမှာ ထည့်ပြောချင်တယ်....သူနဲ့သူ့ကောင်မလေးက...အရမ်းချစ်ကြတယ်ဗျာ....... ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း နောက်ဆုံးနှစ်ေ၇ာက်တဲ့ အချိန်မှာ...သူ့ကောင်မလေးကို သူ့အိမ်က ပေးစားလိုက်တယ်....မပေးစားခင်တော့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းကိုလာခေါ်ခိုင်းပါတယ်....သူဘယ်ပြန်လို့ရမလဲဗျာ....သူနေရာက ၀င်ကြည့်ပြီးခံစားကြည့် ပေးပါအုံး....ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲ ဆိုတာ..ကျွန်တော်လည်းပြန်လို့အကြံပေးလို့ မရဘူးလေ....ဒီလိုနဲ့ပဲ....ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့အချစ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်.....ဒီလို အဖြစ်တွေ ဟာ ဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး မိဘသေလို့ တပ်မတော်ကပြန်ခွင့် ပေးထားပေမယ့်ေ၇ှ့တန်းေ၇ာက်နေလို့ မပြန်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း ရှိသေးတယ်...ဒီလိုဘ၀လေးတွေထဲကို ၀င်မခံစား ပေးရင်နေပါ....ဒါပေမယ့်ဗျာ..နားလည်ပေးစေချင်မိတာတော့ အမှန်ပါပဲဗျာ...ပေးဆပ်မှုတွေ ကြောင့်ရခဲ့တဲ့နှလုံးသား ဒဏ်ရာတွေကို ပြည်သူတွေရဲ့အပြုံးလေးတွေ၊နွေးထွေးမှုလေး တွေနဲ့တော့ ဖြေသိမ်ချင်မိပါတယ်ဗျာ.... ပြည်သူတွေရဲ့ အမုန်းတွေနဲ့၊အပြုံးမဲ့စွာ ရှေ့ဆက် ချီတတ်ရမယ့် ဘ၀လေးတွေ နဲ့ ဝေးကွာ ချင်မိတာတော့ (ငါတို့) လို့အပေါ်မှာ သုံးခဲ့တဲ့ စစ်သားတွေ အတွက် တော့အမှန်ဆုံးပါပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အသုံးတွေရိုင်းသွားရင် ဒီနေရာကပဲ တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုရေးလိုက်တယ့် မဆိုသလောက်စာလေးကြောင့် အညှိးကြီးစွာ မုန်းနေတဲ့ သူတွေရဲ့အပြုံးတွေ ကိုတော့ မြင်ချင်မိပါတယ်ဗျာ။ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့ စကားကိုအမြဲသုံးသုံးနေတဲ့ လူတွေဖာနိုင်ငံဆိုတာကြီးကို ငါတို့ ရှောင်ကွင်းနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတတ်မှုတွက်ကျေနပ်အပြုံးလေးတစ်ခုတမလွန်ကဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ငါတို့ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားလိုက်ကြစို့။ လေးစားစွာဖြင့် ဖိုးသားလေး http://www.facebook// ဒီလိုမြင်နေတဲ့စစ်သားတွေကို ခုထိပုတ်ခတ်နေရင်းတော့ မကောင်းဖူးဗျာ သူတို့လည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူ ဖြစ်တဲ့တွက် အောက်က အချက်တွေလိုချင်တယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေနားလည်နိုင်ကြပါစေ ၁။ ထာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်း တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အမြဲ လက်တွဲမဖြုတ်ပဲညီညာစည်းလုံးသွားကြစို့ ။ငြိမ်းချမ်းရေးမှ သည်ပြည်သာယာရေးသို ။ ၂။ မျက်မှောက်တွင် ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ်ရပ်တည် ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင် ထာဝစဉ်ကြိုးစားသွားမယ့် ပြည်သူ့တပ်မတော်။ ၃။ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု ပြည်သူ့အကျိုးကို အမြဲရှေးရှူ့ကာ ပြည်သူ့ဆန္ဒတွေ အတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးနေသော သမ္မတကြီး။ ၄။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတွက် ခောတ်မီတပ်မတော်တည်ဆောက်နေသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်။ ၅။ ပြည်သူ့ရှေ့က အမြဲ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးသော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ၆။ တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် ကျရာနေရာမှ အခြားပါတီများနဲ့ ကျောသား၊ရင်သား မခွဲခြားပဲအစွမ်းကုန် ပါတီစွဲ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မထားကာစည်းလုံးညီညာစွာ ပြည်သူအကျိုးအမြဲရှေးရှူ့မယ့် ပြည်ခိုင်ဖြိုး။ ၇။တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးအတွက် ကျရာနေရာမှ အခြားပါတီများနဲ့ ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ အစွမ်းကုန် ပါတီစွဲ၊လူပုဂ္ဂိုလ်စွဲမထားကာ စည်းလုံးညီညာစွာ ပြည်သူအကျိုးအမြဲရှေးရှူ့မယ့် NLD။
Posted by ရွှေလီသား at 17:50 No comments: